Natolotra ny Fampanoavana ao amin’ny Fitsarana ambaratonga voalohany Antananarivo ireo miaramila 24 lahy, misy manamboninahitra lietnà, voasaringotra tamin’io raharaha io, rehefa natao fanadihadiana teo anivon’ny Zandarimariam-pirenena. Nivoaka ny didy savaranonando, itazomana am-ponja vojimaika azy ireo. Nalefa ao amin’ny fonjan’i Tsiafahy, miandry ny fitsarana azy ireo.
Natao tao Ampitatafika ny 6 jona 2019 ny famerenana ny tranga « reconstitution des faits », rehefa nahazo « Ordres de poursuite » avy amin’ny ministeran’ny fiarovam-pirenena.
Fitazomana olona tsy araka ny nahimpony, miampy vono olona narahina herisetra no isany vesatra iampangana azy ireo.
Avy any amin’ny Distrikan’Ambohimahasoa, Faritra Matsiatra Ambony ireo lehilahy telo hita faty tao anaty rano ireo ; Kaominina samihafa no fiavian’izy ireo ary olona tsy mifankafantatra ihany koa.
Raha ny fanazavan'ireo havany dia efa-dahy no nosamborina tamin'ny 20 mey 2019 nahiahiana ho olon-dratsy sy mitazona basy tsy ara-dalàna.
Tamin’ny alakamisy 30 mey 2019, izay andro faha-10 nitazomana azy ireo dia nakarina tao anaty kamiao izy ireo. Tamin’io andro alakamisy io dia nolazaina ny fianakaviana, hoy ireto farany, tsy hanatitra hanina intsony fa efa ho vita ny fanadihadiana ary izay sakafon'ireto farany no ho sakafon'izy efa-dahy.
Ny marainan’io alakamisy, andro faha-10 nitazomana azy ireo, io ihany koa no andro farany nahitan'izy efa-dahy ireo havany. Zoma 31 mey 2019 maraina, faty no hita taty Ampitatafika.
Niparitaka tamin’ny Facebook ny vaovao sy ny sary. Tamin’izay koa no nahafantaran’ny fianakaviany fa ry zalahy tany Ambohimahasoa ireto. Nivarahontsana ireo nanatri-maso tamin’ny nampakarana ny razana avy ao anaty rano.
Andia-miaramila nalefa avy aty Antananarivo hanao fampandriantany tany amin’iny Distrikan’Ambohimahasoa iny ireto nahavanon-doza ireto. Maro no manontany, maninona no tsy natolotr’izy ireo ny “Officier de Police Judiciaire” dia Zandary na Polisy ireo olona nosamborina ireo hanokafana fanadihadiana, fa nogiazana ? Inona no andraikitry ny mpaniraka azy ireo manoloana izao habibiana izao ?
Ny alahady 2 jona 2019 hariva no niala tao Antanifotsy ny faty, nalain’ny fianakaviany avy. Mbola baraingo ny amin’ilay lehilahy faha-4 niara-nosamborina tamin’izy telo hita faty ireto, hoe : aiza ?